मुद्दा दायर बिना कसरी उपयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री को उपयोग गर्ने Martech Zone
कसरी मुद्दा दायर बिना उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री को उपयोग गर्ने
बिहीबार, मे 28, 2015 बुधवार, मई 27, 2015 पेट्री रहजा
प्रयोगकर्ता-उत्पादित छविहरू मार्केटरहरू र मिडिया ब्रान्डहरूको लागि बहुमूल्य सम्पत्ति भएको छ, अभियानहरूका लागि केहि आकर्षक र लागत प्रभावकारी सामग्री प्रदान गर्दछ - जबसम्म यसले बहु मिलियन डलर मुद्दा गर्दैन। प्रत्येक वर्ष, धेरै ब्रान्डहरूले यसलाई कठिन तरिकाले सिक्छन्। २०१ 2013 मा, एक फोटोग्राफर BuzzFeed $ 3.6 मिलियन को लागि मुद्दा दायर साइट पत्ता लगाए पछि अनुमति बिना उसको एक फ्लिकर फोटो प्रयोग गरेको थियो। गेट्टी छविहरू र एजेन्सी फ्रान्स-प्रेस (एएफपी) पनि ग्रस्त भए एक $ १२ लाख मुद्दा स्वीकृति बिना फोटोग्राफरको ट्विटर फोटो तान्नु पछि।
प्रयोगकर्ता-उत्पादित सामग्री (UGC) र डिजिटल अधिकार बीचको द्वन्द ब्रान्डको लागि खतरनाक भएको छ। युजीसी सहस्राब्दी जेनेरेसनलाई अनलक गर्नको लागि महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ, जसले कथित रूपमा समर्पण गर्दछन् प्रति दिन .5.4.। घण्टा भन्दा बढी (अर्थात कुल मिडिया समयको percent० प्रतिशत) UGC मा, र यो सबै अन्य सामग्री माथि विश्वास गर्न दावी गर्नुहोस्। जे होस्, एक उच्च प्रोफ़ाइल मुकदमा, अंततः विश्वास र प्रामाणिकता लाई पूर्ववत् गर्दछ जुन यूजीसीले सिर्जना गर्न चाहेको हो।
एक सामान्य गलतफहमी सामाजिक नेटवर्क सामग्री मार्केटर्सको लागि उचित खेल हो। जब सम्म तपाईं सामाजिक नेटवर्क को लागी काम गर्दैन, यो मामला छैन। उदाहरण को रुपमा, फेसबुकका सेवाका सर्तहरू कम्पनीको प्रयोगको अधिकार सुरक्षित गर्नुहोस् र अन्य कम्पनीहरूमा उप-इजाजतपत्र प्रयोगकर्ता सामग्री। ट्विटरको विश्वव्यापी, गैर-विशेष, रोयल्टी-फ्री इजाजतपत्र (sublense को अधिकारको साथ) प्रयोगकर्ता सामग्रीलाई मोनेटाइज गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। फ्लिकरसँग अनिवार्य रूपमा छ असीमित अधिकार यस्तो सामग्री को उपयोग गर्न।
सामाजिक नेटवर्कहरू सामान्यतया यो अधिकारको दुरुपयोग भन्दा राम्रोसँग थाहा छ। इन्स्टाग्रामले २०१२ को अन्त्यमा पत्ता लगाए अनुसार, सेवाका सर्तहरू जसले व्यक्तिगत तस्बिरहरूलाई विज्ञापनमा रूपान्तरण गर्ने वाचा गर्दछ - बिना क्षतिपूर्ति - मिडिया उन्माद पैदा गर्न सक्छ जुन डराउँदछ आधा प्रयोगकर्ता आधार। यदि सामाजिक नेटवर्क सार्वजनिक कानूनी रूपमा UGC कानूनी रूपमा repurpose गर्न सक्दैन, न त तपाईं सक्नुहुन्छ।
जबकि मार्केटरहरूलाई प्रयोगकर्ताले उत्पादित सामग्री अनुमोदन बिना पुन: पोस्ट गर्ने जोखिम थाहा छ, पक्राउ पर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। कपटपूर्ण 'नि: शुल्क' सामग्रीको सुविधाले हाम्रो निर्णयलाई बादल लाउन सक्छ। हामी यूजीसी अभियानको सफलताको ईर्ष्या गर्दछौं जस्तै ALS आइस बकेट चैलेन्ज, र चुनौतीलाई त्यो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्वागत गर्दछौं। अन्तिममा, तथापि, बजारहरूले डिजिटल अधिकारहरूको सम्मान गर्न वा यूजीसी ब्याकफायर हेर्नुपर्नेछ।
त्यसोभए हामी कसरी यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू नजिक छन् र मेरो मुटुको प्रिय छन् - पूर्ण प्रकटीकरणमा मैले यस समस्यासँग लड्न मद्दत गर्न स्कूपशट, एक छवि क्राउडसोर्सिंग प्लेटफर्म स्थापना गरें। जबकि युजीसी क्याप्चर, आयोजन र डिप्लोय गर्ने कुनै एकल विधि छैन, तपाइँले छनौट गरेको टेक्नोलोजीले छविहरूको प्रमाणीकरण गर्न, मोडेल रिलिजहरू सुरक्षित गर्न र छवि अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि एक प्रभावशाली प्रणाली प्रस्ताव गर्नुपर्दछ। अझ विस्तृत विवरणमा, यहाँ तीन मुद्दाहरू छन् जुन तपाईंले UGC जिम्मेवारीका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ:
म कसरी जान्दछु कि छवि प्रामाणिक छ? एक सामाजिक नेटवर्क को लागी एक फोटो पोस्ट पछि, यसको इतिहास पुष्टि गर्न लगभग असम्भव छ। के यो प्रयोगकर्ता द्वारा गोली हानिएको थियो र सिधै पोस्ट गरिएको थियो? के यो ब्लगबाट स्न्याग गरिएको थियो? के यो फोटोशप गरिएको छ? यदि तपाईंको सामग्री मार्केटिंग र ब्रान्ड जर्नलिज्म प्रयासहरूले तपाईंलाई ईमानदारीको उच्च स्तरमा समात्छ भने, तपाईंको छविहरूको उत्पत्ति फरक पर्दछ। सम्भावित मुद्दा चलाउन बाहेक, छविलाई दुरुपयोग वा मिसचक्र्टराइज गर्नाले तपाईंको श्रोताको साथ विश्वास गुमाउन सक्छ। तपाईको यूजीसी समाधानले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि कसैले पनि यो छवि कब्जा गर्न र तपाइँको हातमा पारित बीचमा हेरफेर गर्न सक्दैन। यदि छवि वेबमा पहिले नै पोष्ट गरिएको छ भने, तपाईं त्यस बारे निश्चित हुन सक्नुहुन्न।
के मसँग यो फोटो प्रकाशित गर्न अनुमति छ? - वफादार ग्राहकहरू UGC मा भाग लिन मन पराउँछन्। उनीहरू विश्वस्त छन् कि तपाइँ ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि तिनीहरूको सामग्री छान्नु भएकोमा उनीहरूलाई सम्मान छ। यद्यपि उनीहरूका परिवार र साथीहरूले त्यो भावना साझा नहुन सक्छन्। त्यसो भए, मानौं कि एक फेसबुक फ्यानले तपाइँलाई उनको र तपाइँको लुगाको ब्रान्ड लगाएको तीन साथीहरूको फोटो प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं सबै चार व्यक्तिहरूको लागि मोडेल रिलिजहरू प्राप्त गर्न असफल भएमा, तिनीहरू मध्ये कुनै एकले पनि मुद्दा हाल्न सक्छ। दुर्भाग्यवस, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने र रिलिजहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ। सबैलाई गरेको ट्र्याक गर्नु भन्दा तपाई UGC स tool्ग्रह उपकरणको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ जुन स्वचालित रूपमा तपाईंको कार्यप्रवाह भित्रै मोडेल रिलिजहरू स col्कलन गर्दछ।
म कसरी छवि अधिकारहरू खरीद र प्रमाणित गर्ने छु? आफैलाई बचाउनको लागि, कानुनी रूपमा सिर्जना गर्नुहोस् र सिर्जनाकर्ता र तपाईंको संगठन बीच छवि इजाजत पत्रको हस्तान्तरण दस्तावेज। अवश्य पनि, तपाईंले ईमेल रेकर्डहरू वा इनभ्वाइसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखाउनको लागि कि तपाईंले इजाजत पत्र सही स्थान्तरण गर्नुभयो, तर यो अत्यन्तै गडबड हुन्छ यदि तपाईं हजारौं प्रयोगकर्ता-उत्पादित छविहरू स collecting्कलन गर्दै हुनुहुन्छ भने। UGC कार्यप्रवाह
दिनको अन्त्यमा, फेसबुक र ट्विटर फोटोहरू एक मिलियन डलर मुकदमा र पीआर घोटालाको लायक छैन। UGC आधुनिक सामग्री मार्केटिंगको एक प्रमुख घटक हो, तर यसलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयनको आवश्यक पर्दछ। बजफिड र गेट्टी छविहरू / एएफपी डिबेंकहरू दुवै रोक्न सकिन्छ, र मसँग कुनै श no्का छैन कि यी कम्पनीहरूले छवि अधिकारहरू प्रबन्ध गर्नको लागि आफ्नो प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गरे।
एक मार्केटरको रूपमा, तपाइँको विश्वसनीयता, तपाइँको कार्यनीति र तपाइँको काम लाई सुरक्षित गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण समुदायलाई UGC लाई सम्भावित पछाडिबाट बचाउन मद्दत गर्नुहोस्।
टैग: प्रामाणिकसामग्री प्रयोगसेवा को शर्त फेसबुकफ्लिकरछवि प्रयोगरोयल्टी-फ्री इजाजतपत्रट्विटर उपयोगका सर्तहरूUGCअसीमित अधिकारप्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्री
पेट्री रहजा यसका संस्थापक र सीईओ हुन् स्कूपशटफोटो र भिडियो भीडसोर्सिंगका लागि मोबाइल प्लेटफर्म। आईटी क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुभवको साथसाथै पेट्रीको पनि व्यवसाय प्रबन्धन अनुभव छ, जुन २० बर्ष भन्दा बढीमा फ्याँकिएको छ। उसको अघिल्लो उपक्रमहरुमा एसेन्चर, बीईए प्रणाली इंक, Iobox Oy, CRF Box Oy र Iprbox Oy समावेश छ।
तपाइँलाई अनलाइन साझेदारी गर्न के उत्प्रेरित गर्दछ? साझा को मनोविज्ञान